ဆံပင်စိုလို့ ဖျားတာလား...................... - Hello Sayarwon
ရေစိုကြီးနဲ့ မနေနဲ့။ ဆံပင်တွေ စိုရင် ဖျားဦးမယ် ခေါင်းကို သေချာ လုံအောင်ဆောင်းထား။ ခေါင်းရေစိုကြီးနဲ့ အပြင်မထွက်နဲ့ ဖျားမယ်လေဆိုတဲ့ စကားတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက တကယ်ပဲ ဖျားစေတာလားလို့ တွေးမိဖူးပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးလည်း တွေးမိဖူးတယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆံပင်စိုလို့ ဖျားတာလားဆိုတာကို သေချာသိရအောင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်စို့နော်။
မိုးရေထဲ ထွက်ခါနီးရင် ခေါင်းကို သေချာလုံအောင် ခေါင်းစွပ်စွပ်ပါ။ ခေါင်းရေစိုပြီး တော်ကြာ ဖျားဦးမယ်ဆိုတော့ ခေါင်းရေမစိုရင် မဖျားတော့ဘူးလားလို့ သိချင်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ အအေးမိတာ၊ ဖျားတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာက ခေါင်းရေစိုလို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဆံပင်ရေစိုနဲ့ အပြင်ထွက်ရင် လေတိုက်ခံရလို့ ဖျားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်စိုနဲ့ အပြင်ထွက်တာကြောင့် ဖျားစေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က ပိုပြီး ကပ်ပါလာတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဆံပင်ရေစိုလို့ဆိုတာထက် ပြင်ပက နေရာတွေမှာက အိမ်ထဲမှာထက် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပိုများတာကြောင့်ပါ။
ဒါကြောင့် အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ပိုမို ထိတွေ့မိပြီး ဖျားနာတာကို ခံစားရတာပါ။ ဆံပင်စိုတာကို ခြောက်အောင်သုတ်ဖို့ကတော့ လိုတာပေါ့။ ဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့အောင် မသုတ်တဲ့အခါ ဦးရေပြားမှာ မှိုစွဲတာလိုမျိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်လို့ပါ။
ဆံပင်စိုလို့ ဖျားတယ်ဆိုတာ အတွေးမှား တစ်ရပ်ပါ
အေးတဲ့ရာသီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို အထူးသဖြင့် မိုးရာသီ နဲ့ ဆောင်းရာသီတွေမှာ အအေးမိဖျားနာတာတွေ အဖြစ်များသလို တုပ်ကွေးလည်း အဖြစ်များကြပါတယ်။ ဒီကာလရဲ့ အေးမြစိုစွတ်မှုက လေထုထဲမှာ အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အချိန် ကြာကြာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်စေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုကာလတွေမှာ လူထူတဲ့နေရာတွေကို သွားမယ်ဆိုရင် အအေးမိဖျားနာဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အလွယ်တကူကူးစက်ပြီး ဖျားနာစေနိုင်လို့ပါ။
ဆံပင်တွေက ဦးခေါင်းကို နွေးထွေးမှု ပေးပါတယ်။ ဆံပင်စိုတာ၊ အဝတ်ရေစိုတွေက ချမ်းတုန်တာနဲ့ နေရထိုင်ရတာကို အဆင်မပြေဖြစ်စေတယ်ဆိုပေမယ့် ဖျားနာစေတဲ့အထိတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ အရေပြားပြဿနာကိုတော့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက ခေါင်းအပြင် တစ်ကိုယ်လုံးအေးနေတဲ့အခါ ကိုယ်အပူချိန်ကျသွားပြီး ခုခံအားကို ကျစေပါတယ်။ ကြာကြာနေရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ နဂိုတည်းက ခုခံအားမကောင်းဘဲ ဖျားချင်နာချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဖျားနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆံပင်စိုတိုင်း ဖျားတယ်ဆိုရင် ခေါင်းလျှော်တိုင်း ဖျားနေမှာပါ။
ဖျားနာမှုတွေ ဖြစ်ရတာက အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းတို့ကနေတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို ဝင်ရောက်တာကြောင့်ပါ။ ဥပမာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိနေတဲ့ လက်ကို သေချာ သန့်စင်ဆေးကြောတာမျိုး မရှိဘဲ မျက်လုံးကို ထိမိတာ၊ နှာခေါင်းကို ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်မိတာတွေကြောင့် ဖျားနာရတာပါ။
အအေးမိတဲ့အခါ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ…..
အသက်ရှူရင် တရွှီရွှီ ဖြစ်တာ
ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးဆို ကုသမှု ခံယူဖို့ လိုမလဲ……
သာမန် ဖျားနာမှုက ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက် အတွင်းမှာ သူ့အလိုလို သက်သာသွားတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား နည်းတဲ့သူတွေမှာတော့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ခံစားရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားပေးပါ။
လေဝင်လေထွက် ကောင်းတဲ့နေရာမှာ နေပါ။
တကယ်လို့ အခုလို လက္ခဏာတွေ ခံစားရမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ခံယူဖို့ လိုပါမယ်။
အဖျားက ၁၀ ရက်ကျော်တဲ့အထိ မသက်သာဘဲ ဖြစ်မယ်
ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရမယ်။ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရမယ်
အဖျားရှိမယ် ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံး သွားရောက်ဖို့ လိုပါမယ်။
Can wet hair make you sick? https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/can-wet-hair-make-you-sick#:~:text=The%20short%20answer%20is%20no,likely%20when%20you%20go%20outside. Accessed Date 13 September 2021
Myth Buster: Wet Hair Can Result inaCold http://white-wilson.com/goodhealthblog/?p=551 Accessed Date 13 September 2021